Barceló Bávaro Grand Resort na-emegharị karama karama 4k kwa ụbọchị
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ịrụ ọrụ » Barceló Bávaro Grand Resort na-emegharị karama karama 4k kwa ụbọchị
Akụkọ mkpakọrịta • Na-agbasa News Travel • Akụkọ kacha ọhụrụ na Dominican Republic • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
N'oge na-adịbeghị anya, Green Globe kwadoro ụlọ ọrụ Barceló Bávaro Grand Resort na Dominican Republic na-enye ala ahụ akara ngosi pụtara ìhè nke 91%.
Green Globe na nso nso recertified na Barceló Bávaro Grand Resort na Dominican Republic na-enye ala ahụ akara ngosi pụtara ìhè nke 91%.
Green Globe bụ mmemme asambodo izizi emere maka afọ 25 gara aga iji duzie ụlọ ọrụ ndị njem na ụzọ maka arụmọrụ na njikwa na-aga n'ihu. The Green Globe Standard gụnyere 44 amanyere bụ isi njirisi na-akwado ihe karịrị 380 nnabata egosi. Asambodo a nyere ọtụtụ ụlọ nkwari akụ dị iche iche, nke gụnyere Barceló Bávaro Palace na Barceló Bávaro Beach Adults Only Resort, dị ka otu n'ime njigide kachasị elu n'ụwa,
Pedro Parets, onye isi njikwa na Barceló Bávaro Grand Resort kwuru, sị, "Green Globe bụ usoro asambodo nkwado kachasị mkpa n'ime mpaghara ndị njem na ọ bụ nsọpụrụ maka Barceló Bávaro Grand Resort iji nweta nnabata a nke na-akwụghachi ụgwọ ọrụ anyị oge niile iji nye ihe kacha mma. ọrụ maka ndị ọbịa anyị ebe anyị na-aga n'ihu ịkwanyere agwaetiti Caribbean nwere agwaetiti ahụ gburugburu.
Nweghachi nke karama plastic 4.000 kwa ụbọchị site na ụlọ nri ya na nri dị iche iche bụ otu ihe atụ nke mmemme gburugburu ebe obibi na ihe onwunwe nke na-akwado omume na-adigide. Ọzọkwa, a na-achịkwa ụlọ ọrụ na-ahụ maka ihe mkpofu ahihia nke ọma, na-enyocha ma na-elekọta ya site n'aka onye ọkachamara na-abụghị onye ọrụ ngo nke na-enyere aka n'ụzọ dị mkpa n'ibelata mmetụta gburugburu ebe obibi.
Ebumnuche ike na nchekwa mmiri dịkwa. A na-etinye biomass na ike anyanwụ n'ime ike ọkọnọ ma etinyere usoro nke na-eji okpomọkụ na-ekpo ọkụ nke sitere na ndị na-esi mmiri ọkụ wee nye mmiri ọkụ na akwa. Barceló Bávaro nwekwara sistemụ njikwa mmiri eji emechi mmiri nke na-eji mmiri ojii na isi awọ iji belata ojiji zuru oke ma bulie arụmọrụ nke ọma.
Na 1985, Bartù Barceló ahụ chọtara ebe ọhụrụ: Bávaro Beach, otu paradaịs dị na Dominican Republic. Barceló Bávaro Grand Resort ghọrọ ụlọ nkwari akụ mbụ imeghe nke ndị Spain nwere na Punta Cana.
Taa, afọ iri atọ na atọ ka nke ahụ gasịrị, ụlọ nkwari akụ ahụ amaliteghachiri kpamkpam ịghọ ihe atụ ọsụ ụzọ na Caribbean ọzọ. Site na nrụzigharị bụ isi, anyị nwere ụlọ ọrụ okomoko abụọ n'ime ogige Barceló Bávaro Grand Resort: nke mbụ bụ Barceló Bávaro Palace, na-enye paradaịs emere ka ezinụlọ maka elekere 33 kwa ụbọchị; ma n'aka nke ọzọ, ihe Barceló Bávaro Ndị okenye naanị, na ebe a na - ekewaputa ya ebe ndi obia puru inweta ebe a magburu onwe ya n’ebe ndi okenye n’enwe udo.
Ọnọdụ mara mma nke nwere ọtụtụ ime ụlọ na ọrụ ndị na-ele anya n'oké osimiri na-eme ka nke a bụrụ ebe a na-agaghị emeri Beach Front All Inclusive Resort.
Green Globe bụ usoro nkwado nke ụwa niile dabere na njirisi mba a nabatara maka ịrụ ọrụ na njikwa nke njem na njem azụmahịa. Na-arụ ọrụ n'okpuru ikikere zuru ụwa ọnụ, Green Globe dabeere na California, USA ma a na-anọchite ya n'ihe karịrị mba 83. Green Globe bu onye Mgbakwunye so na United Nations World Tourism Organisation (UNWTO). Maka ozi, biko pịa ebe a.
ulo oru California Caribbean asambodo emechi nkwa Mgbagwoju anya nnabata ibiere kwa Dominican Dominican Republic arụmọrụ ike gburugburu ebe obibi gburugburu ebe obibi Mmetụta gburugburu ebe obibi naanị owuwu ezinụlọ mbụ hotel -esonụ onye isi njikwa Globe green Green Globe eduzi aka okpomọkụ nsọpụrụ awa atụmatụ ikike ebe okomoko manager so ọhụrụ ebe ọrụ arụmọrụ nzukọ n'èzí pụtara ìhè Obí paradise ụzọ udo ike omume nwere ihe ùgwù ọkachamara omume mmemme Njirimara onwunwe Punta cana udu -enweta mmata imegharị ihe maka iji belata imeghari mba eme nkwanye ùgwù ụlọ oriri na ọṅụṅụ ụgwọ ọrụ ụlọ Oké osimiri anyanwụ spanish ọkọlọtọ ọkọnọ nkwado adigide usoro ịkwa akwa Caribbean azụmahịa njem ụlọ ọrụ njem nleta ngalaba njem njem na njem ọgwụgwọ United Nations Tourtù Mba Ndị Na -ahụ Maka Nleta Ụwa nke Mba Ndị Dị n'Otu UNWTO USA n'efu mmiri Njem nleta ụwa World Tourism Organisation n'ụwa